प्रवासी खबर – Bihani Post
December 15, 2018	प्रवासी खबर Comments Off on बन्दा किन्न गएकी महिला करोडपति बनेर फर्किइन्
मानिसको भाग्य कुनबेला चम्किन्छ, अनुमान गर्नै गाह्रो हुन्छ । भनिन्छ, भाग्य चम्काउन कुनै साबुन चाहिँदैन । अमेरिकामा एकजना महिलाको भाग्य चाहीँ बन्दाले चम्काइदिएको छ । अमेरिकाको मेरिल्याण्डमा बस्ने वनिरस्सा नामकी एक महिला बन्दाका कारण करोडति बनेकी छिन् । आफ्नो बुवाले पठाएर तरकारीका लागि बन्दा किन्न बजारमा गएकी उनलाई सायद भाग्यले …
मलेसियाले नेपाललाई दियो यस्तो झट्का : नेपाली युवाको मलेसिया रोजगारी मा यस्तो- ! पूरा हेरी शेयर गरौ
December 10, 2018	प्रवासी खबर Comments Off on मलेसियाले नेपाललाई दियो यस्तो झट्का : नेपाली युवाको मलेसिया रोजगारी मा यस्तो- ! पूरा हेरी शेयर गरौ
काठमाडौं । नेपाल र मलेसियाबीच भएको श्रम सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि मलेसिया सरकार असन्तुष्ट बनेको छ । नेपालबाट कामदार लैजाने कम्पनीहरुलाई अनुमति दिन मलेसिया सरकारले बन्द गरिदिएको छ । मलेसिया सरकारले देश बाहिरबाट कामदार ल्याउन नीजि क्षेत्रका कम्पनीलाई जिम्मा दिँदै आएको छ । देशबाहिरबाट कामदार ल्याउने कम्पनीले नेपालका लागि अनुमति मागेका …
पहिला पति-पत्निबीच झगडा, त्यसपछि ३ वर्षीयाँ छोरीको हत्या, डेढ वर्षको छोरा र पत्नि..!
November 19, 2018	अपराध, प्रवासी खबर Comments Off on पहिला पति-पत्निबीच झगडा, त्यसपछि ३ वर्षीयाँ छोरीको हत्या, डेढ वर्षको छोरा र पत्नि..!
पहिला पति-पत्निबीच झगडा, त्यसपछि ३ वर्षीयाँ छोरीको हत्या, डेढ वर्षको छोरा र पत्नि..! एजेन्सी। नयाँदिल्लीको हौजरानी क्षेत्रमा घर भित्र ३ वर्षीयाँ बालिकाको हत्या भयो। उसको डेढ वर्षको सानो भाई र आमाको घाँटि काटिएको अवस्थामा फेला परेको छ। शनिबार बिहान यो घटनाबारे जानकारी भएपछि छिमेकी तीनै जनालाई म्यास अस्पतालमा भर्ना गराए। …
जापानले नेपाली कामदार भित्र्याउन नयाँ कानुन यस्तो बनायो
November 4, 2018	प्रवासी खबर Comments Off on जापानले नेपाली कामदार भित्र्याउन नयाँ कानुन यस्तो बनायो
जापानको मन्त्रिपरिषद्ले अध्यागमनसम्बन्धी नियम खुकुलो पार्न कानुनको एउटा मस्यौदा पारित गरेको छ। नयाँ कानुनअनुसार देशमा कामदार अभाव भएका क्षेत्रमा काम गर्न दिन विदेशीका लागि दुई प्रकारका प्रवेशाज्ञाको प्रावधान गरिनेछ। कडा अध्यागमननीति भएको जापानमा थौरै विदेशीले मात्र काम गर्न पाउँछन्। नयाँ नियम लागु भएपछि निर्माण, कृषि र स्वास्थ्यसेवाका क्षेत्रमा काम गर्न …
खुसीको खबर जापान जान चाहनेहरुको लागी अब अनलाइनबाटै भाषा परीक्षा दिन पाइने
November 1, 2018	प्रवासी खबर Comments Off on खुसीको खबर जापान जान चाहनेहरुको लागी अब अनलाइनबाटै भाषा परीक्षा दिन पाइने
जापानमा जान चाहने नेपालीले पहिलो पटक अनलाइनबाटै जापानी भाषा परीक्षा दिन पाउने भएका छन् यहाँ आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जापानको प्राक्टिकल जापानीज कम्युनिकेसन (पिजेसी) ब्रिजसँग सहकार्य गरी अनलाइनबाटै भाषा परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी मोग सर्भिस प्रालिका अध्यक्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ओमहरि प्रजापतिले जानकारी दिनुभयो ।कागजबाट लिखित परीक्षा …
अफगानिस्तानमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुदाँ चालकदलका सदस्यसहित २५ जनाको मृत्यु
October 31, 2018	प्रवासी खबर, समाचार Comments Off on अफगानिस्तानमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुदाँ चालकदलका सदस्यसहित २५ जनाको मृत्यु
अफगानिस्तानको दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रमा सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ उक्त सेनाको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा २५ जनाको मृत्यु भएको हो।अन्तराष्ट्रिय मिडियाका अनुसार दुर्घटनामा चालकदलका सदस्यसहित २५ जनाको मृत्यु भएको बताइएको छ ।फाराह प्रान्तबाट हेरात जाँदै गरेका सेनाका दुई हेलिकप्टर मध्ये एउटा दुर्घटनामा परेको बताएको छ उक्त सेनाको हेलिकप्टर खराब मौसमका कारण …
भर्खरै दुबई सरकारको यस्तो अचम्मको निर्णय ! एक पटक सबैले हेर्ने पर्ने भिडियो
October 31, 2018	प्रवासी खबर, भिडियो Comments Off on भर्खरै दुबई सरकारको यस्तो अचम्मको निर्णय ! एक पटक सबैले हेर्ने पर्ने भिडियो
भर्खरै दुबई सरकारको यस्तो अचम्मको निर्णय ! एक पटक सबैले हेर्ने पर्ने भिडियो आममाफी प्रकृयामा अवैधानिकरुपमा बसोबास गरिरहेका नेपालीसहित अन्य मुलुकका नागरिकलाई वैधानिक बन्न अथवा आवश्यक कानुनी प्रकृया पूरा गरी आफ्नो मुलुक र्फकन आग्रह गरिएको छ ।
मलेसिया जानेका लागि खुसीको खबर,मलेसिया जान अब ५८ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने
October 30, 2018	प्रवासी खबर Comments Off on मलेसिया जानेका लागि खुसीको खबर,मलेसिया जान अब ५८ सय रुपैयाँ तिरे पुग्ने
काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि मलेसिया जाने नेपालीले अब ५८ सय रुपैयाँ मात्र खर्चिए पुग्ने भएको छ। नेपाल र मलेसिया सरकारबीच सोमबार काठमाडौंमा भएको द्विपक्षीय श्रम समझदारीमा ‘सरकारलाई बुझाउने श्रमिक कल्याणकारी कोषको एक हजार र बिमाको ४८ सय २५ सबै खर्च रोजगारदाताले बेहोर्ने’ उल्लेख छ। कामदार पठाउन लाग्ने सेवा शुल्क, …
यी नै हुन् युएईमा रक्सी पिएर नेपाली युवतीको हत्या गर्ने सोनी तामाङ, मृत्युदण्डको सजाए
October 28, 2018	दुखद खबर, प्रवासी खबर Comments Off on यी नै हुन् युएईमा रक्सी पिएर नेपाली युवतीको हत्या गर्ने सोनी तामाङ, मृत्युदण्डको सजाए
नुवाकोटकी सोनी तामाङले चक्कु चलाउँदा काठमाडौंकी सिर्जना बरालको ज्यान गएको हो ठेगाना नखुलेका ममता चौधरी, सलिना मगर र आशा दर्जी घाइते भएका हुन् । ‘बिदाको नाममा मदिरा सेवन गरेर सविता तामाङ एक्लैले तीन जना साथीलाई चक्कु प्रहार गरेको कम्पनीले जानकारी दिएको छ,’ युएईका लागि कार्यबाहक राजदूत सागर फुयाँलले भने,‘उनलाई अनुसन्धानको …
यी शिक्षकले नाघे सबै मर्यादा, भिडियोमा हेर्नुहोस् आफ्नी छात्रासँग स्कुलमै गरे यस्तो हर्कत (भिडियो सहित)
October 28, 2018	प्रवासी खबर, भिडियो Comments Off on यी शिक्षकले नाघे सबै मर्यादा, भिडियोमा हेर्नुहोस् आफ्नी छात्रासँग स्कुलमै गरे यस्तो हर्कत (भिडियो सहित)
हाम्रो समाजमा गुरुको स्थान निकै उच्च हुन्छ । कैयौं गुरुहरु यस्ता थिए कि उनीहरुको अहिलेसम्म उदाहरण दिइन्छ । तर, अर्कोतर्फ अहिले केही शिक्षकले आफ्नो मर्यादा नै भुल्न थालेका छन् । भारतको आगराका एक शिक्षकको भिडियो अहिले सामाजिक संजालमा भाइरल भइरहेको छ । ती शिक्षकले आफ्नो मर्यादा नाघ्दै शिक्षक शब्दलाई नै …